१० मिनेटको अन्तरमा दुईथरि कोरोना रिपोर्ट : जनमोर्चाका सांसद बिरामी कि अपहरण ? - Kantipath.com
१० मिनेटको अन्तरमा दुईथरि कोरोना रिपोर्ट : जनमोर्चाका सांसद बिरामी कि अपहरण ?
गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको तेस्रो दिन बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान पनि बुधबारकै लागि तय थियो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद त्यही दिन एमाले सरकार ढल्नेमा ढुक्क देखिन्थे । घटनाक्रमले एकाएक कोल्टे फेर्‍यो जब जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही देखा परेनन् ।
संसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका एमाले सांसद राजीव पहारी, प्रभा कोइराला र कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङ उपस्थित थिएनन् । कोरोना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिए बैठकमा केहीबेर उपस्थित भएर मतदान गर्न पाउने सहमति मंगलबार नै भएको थियो । पहारी, कोइराला र गुरुङबाहेक स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि प्रदेशसभामा उपस्थित भएनन् । अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निश्चित भएको जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कमै नआएपछि विपक्षी समीकरणलाई सकस पर्‍यो । बैठक चल्दाचल्दै जनमोर्चाकै सांसद पियारी थापा, कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठ र जसपा सांसद धनमाया लामा संसद् भवनबाट बाहिरिए । उनीहरू एउटै गाडीमा शाहीको खोजीमा निस्किए ।
दिउँसो ४ बजे सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगन गरे । सचेतक समेत रहेकी सांसद थापाले शाहीको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै सभामुखलाई निवेदन दिइन् । शाहीको जीवनरक्षा गर्न र अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म सदनको कारबाही अगाडि नबढाउन माग गरिन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सूचना टाँस गरी अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गरे । बिहानसम्म ठीकठाकै भएका र दलका नेता कृष्ण थापासँग १ बजेर ३७ मिनेटमा फोनमा समेत मतदानमा आउने बताएका सांसद शाही अचानक कोभिड आईसीयूमा भर्ना भएको खबरले सबैले अचम्म माने ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको बुधबार बिहान ७ः२० बजेको रिपोर्टअनुसार ३ सांसदमा कोरोना पोजिटिभ देखियो, जसमा शाहीको नाम थिएन । स्वकीय सचिव मिलन हमालका अनुसार बुधबार मध्याह्न १२ बजे सांसद शाही एक्कासि ढलेपछि अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । सांसद शाही कोरोना संक्रमित भएर आईसीयूमा अक्सिजन दिँदै राखिएको खबर एकाएक फैलियो ।
अज्ञात भनिएका सांसद शाही पोखराकै चरक मेमोरियल अस्पतालमा पजिटिभ रोपोर्टसहित साँझ उपचाररत अवस्थामा भेटिए । अस्पतालले उनलाई भेट्न नदिए पनि उनी उपचाररत रहेको फोटो सार्वजनिक गर्र्दै अवस्था सामान्य रहेको बताएको छ । अस्पताल छाउनी बनेको छ । शाही भर्ना भएदेखि नै अस्पताल परिसरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी खटाइएको छ । जनमोर्चाका नेता–कार्यकर्तालाई शाहीलाई भेट्न दिइएको छैन ।
लाइफकेयर डाइग्नोस्टिक सेन्टरमा परीक्षण गरिएको पजिटिभ रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार मंगलबार ४ बजे सांसद शाहीको स्वाब संकलन गरिएको छ । उनको पजिटिभ रिपोर्ट बुधबार बिहान ७ः३० बजे प्राप्त भएको छ । संसद् परिसरमा परीक्षण गरिएको समय उल्लेख छैन । त्यसको रिपोर्ट भने बुधबार बिहान ७ः२० मा प्राप्त भएको हो । लाइफकेयर डाइग्नोस्टिक सेन्टरका कन्सल्टेन्ट डा. अम्मर नागिलाले स्वाब लाइफकेयरमा नभई बाहिर संकलन गरेर ल्याइएको र परीक्षणका लागि दिइएको बताए । उनका अनुसार फेवासिटी हस्पिटलका हिमाल गौतमले स्वाब परीक्षणका लागि संकलन गरेर पु¥याएका थिए । फेवासिटीका इभेन्ट म्यानेजमेन्ट रहेका गौतम राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका सचिव हुन् ।
रिपोर्टअनुसार उनको स्वाब मंगलबार ४ बजे संकलन गरेको देखिन्छ । पोखराकै लाइफ केयर डायगोनोस्टिक एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा बुधबार बिहान ७ः३० बजे पोजिटिभ रिपोर्ट आएको बताइएको छ । यसरी हेर्दा, सांसद शाहीले मंगलबार एकै दिन दुईपल्ट स्वाब दिएको देखिन्छ भने १० मिनेटको फरकमा आएको रिपोर्टमध्ये पहिलोमा नेगेटिभ र दोस्रोमा पोजिटिभ छ । प्रस्तावमा मत दिन रोकेर सरकारले गुण्डागर्दी गरेको नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्सन गर्दै सरकारले स्वस्थ मानिसलाई अस्पतालको आईसीयूमा कसैलाई भेट्न नदिएर बन्दी बनाएको आरोप लगाए। उनले अविश्वासको मत दिन रोक्ने नाममा सत्ता संरक्षित गुण्डागर्दी गरेको भन्दै शाहीको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेका छन्।
शर्माले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘स्वस्थ, तन्दुरुस्त मान्छेलाई पृथ्वी चोकको चरक अस्पतालको आईसीयूमा कसैलाई भेट्न नदिएर किन राखिएको छ? उपचारका नाममा बन्दी? अविश्वासमा मत दिन रोक्ने नाममा सत्ता संरक्षित गुण्डागर्दी ?’
Previous Previous post: निषेधाज्ञामा पनि नियमित उडान
Next Next post: जसपालाई फकाउन मुद्दा फिर्ता